आस्था सिक्किमबाटै फेरि बोलिन्, फेसबुकमा खैलाबैला ! - Nepal Insider
आस्था सिक्किमबाटै फेरि बोलिन्, फेसबुकमा खैलाबैला !
साङ्गीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा सिक्किममा रहेकी र प्रहरीको फरार सूचिमा रहेकी चर्चित गायिका आस्था राउत तत्काल नेपाल नफर्कने भएकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटसमार्फत उनले तत्काल नेपाल नफर्किने संकेत दिएकी छन
। १० दिन अघि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको घटनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका बेला उनी तत्काल स्वदेश नफर्कने भएकी हुन् ।
माघ १ बुधबार भद्रपुरको उडान हुँदै पूर्वी नेपालबाट सिक्किम जान लागेका बेला आस्थाको त्रिभुवन विमानस्थलको चेकजाँचमा खटिएकी प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठसँग भनाभन र त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित हुँदै भिडियो सार्वजनिक गरेपछि उनी विवादमा तानिएकी थिईन् । सोही भिडियोलाई लिएर प्रहरी जवान रमिताले प्रहरीमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी जाहेरी दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आस्थाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।
तर, उनी तत्काल नफर्कने संकेत देखिएको छ । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यही जनवरी २६ तारिखमा हुने कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता रहने बताएकी छन् ।
त्यस्तै गायिका आस्था राउत प्रकरणमा प्रहरी लचक बन्ने संकेत देखिएको छ । राउतले गल्ती गरेको निष्कर्ष निस्किए पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान लम्ब्याइराख्नु पर्ने स्थिति नरहेको प्रहरीले बताएको हो ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्ने भए पनि लचक हुनसक्ने ठाउँ रहेको बताए ।
‘विमानस्थलमा पक्राउ पर्छिन्, पर्दिनन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिने विषय होइन’, उनले भने, ‘पीडितलाई न्यायको चाँडो अनुभूति गराउन हामीले पक्राउमा हतार गर्ने हो । तर, त्यो कसुर अनुसार हुन्छ ।’
भारतको सिक्किममा आयोजित एक सांगीतिक कार्यक्रम सहभागी हुन जाने क्रममा राउत १ माघमा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेकी थिइन् । काठमाडौं–चन्द्रगढी उडान अघि सुरक्षा जाँचका क्रममा उनको प्रहरी जवान रमिला श्रेष्ठसँग विवाद भएको थियो ।
त्यसपछि फेसबुक लाइभ गरेर अपशब्द बोलेका कारण राउतको आलोचना भएको थियो । प्रहरीले पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो ।
विमानस्थलमा भएको व्यवहारभन्दा पनि सिंगो प्रहरी संगठनलाई गाली गलौज गर्दै अपशब्द बोलेको विषय ठूलो हो’, एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘विमानस्थलमा हुने जुन घटना छ, त्यो बेलाबेला हुने गर्छ ।’
प्रहरी जवान श्रेष्ठले अभद्र व्यवहारको कसुरमा आस्थाविरुद्ध दिएको उजुरी आइतबार दर्ता भएको छ । अब कानूनतः आस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित भएपछि मात्रै यो प्रकरण टुंगिनेछ ।
चाहेजस्तो मान्छे पाएको छैनः आस्था राउत
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा छोटो समयमा लोभलाग्दो सफलता हासिल गरेकी आस्था राउत स्टेज कार्यक्रममा रुचाइएकी गायिका हुन् । ‘सालको पात टपरी गाँसेर’को रिमिक्स गाएपछि चर्चामा आएकी उनका ‘चौबन्दीमा पटुकी’, ‘झुम्के बुलाकी’जस्ता गीत चर्चित छुन् । चलचित्र एवं कलेक्सन एल्बममा पनि उत्तिकै स्वर दिइरहेकी गायिका आस्थासँग विनीता मरहट्टाले गरेको कुराकानीः
नयाँ एल्बम कहिले ?
तयारी भइरहेको छ । यो साता कार्यक्रमको लागि अस्ट्रेलिया जाँदैछु । एक महिनापछि फर्किन्छु । त्यसपछि कामको गति अझ बढ्नेछ । २०७४ भित्र एल्बम निकाल्ने तयारीमा छु । भाव राम्रो भएको फरक शैलीको गीत लिएर आउनेछु ।
महिला सशक्तीकरणका लागि सहयोग गर्न चाहन्छु । ‘झुम्के बुलाकी’ मा छोरीलाई सक्षम हुने वातावरण मिलाइदेऊ भनेर चेलीको आवाज बोलेकी छु । मेरो गीतमा मानवतासँग जोडिएका कुनै न कुनै कुरा हुन्छ । यो प्रयास जारी छ ।
Prevसभामुख बनाउन नहुने भन्दै सापकोटालाई तत्काल प’क्राउ गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
Nextजिग्रीले रक्षासँग गरे विबाह
विमानस्थलमा प्रहरीसँग ‘मु ख’ छो डेकी आस्था फेसबुक लाइभमा माफी माग्दै रोइन् (भिडियो)
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (38206)